Iindaba zeApple Pay azizukufumaneka ngexesha | Ndisuka mac
Iindaba zeApple Pay azizukufumaneka ngexesha
Oko kubizwa ngokuba yiApple Pay Cash, eboniswe eKeynote ngoJuni ophelileyo, eWWDC, bekucwangcisiwe ukuba ibekhona ukusuka kwibhetri yeendaba zehardware ezaziswe ngu-Apple kwiveki ephelileyo kunye nokuphehlelelwa kwe-iPhone X, phakathi kwabanye. Nangona kunjalo, amanqaku anikezelwa yile misebenzi mitsha yokuhlawula awuyi kuthi ekugqibeleni afumaneke ngomhla ohleliweyo.
I-Apple ibhekisa kwezi mpawu ngaphandle kokuchaza nawuphi na umzuzu othile. Emva kokukhutshwa kwesoftware yezixhobo ezibonisiweyo, inyani eya kuthi inikwe ekuqaleni kweveki ezayo, kwii-iPhones ezintsha okanye iApple Watch Series 3, I-Apple Pay Cash ibhalwe "ukuza kokuwa."
Nje ukuba lo msebenzi mtsha usebenze, abathengi be-Apple abanesixhobo esihambelanayo, Baza kukwazi ukwenza iintlawulo kwaye bafumane imali kubahlobo nakusapho, ngokukhawuleza, ngokulula nangokukhuselekileyo. Inkqubo ilula ngokwenyani, kufuneka uthumele umyalezo ngeMessage kwaye ubuze uSiri ukuba akuhlawulele.
Xa le ntlawulo yenziwe, umamkeli uya kuba nakho ukufumana imali kwangoko kwaye ayisebenzise kwi-Apple Wallet yabo, Apho uyakufumana khona ikhadi lakho elitsha elitsalwa ngu-Apple Pay Cash.
Ngaphandle kwento yokuba kungekudala emva kwengcaciso ephambili yeveki ephelileyo, u-Apple ukhuthaze lo msebenzi kwiwebhusayithi esemthethweni, ke bekucingelwa ukuba singayonwabela le nto intsha kunye nesoftware entsha (zombini i-iOS 11 kunye ne-watchOS 4), izolo lonke uhlaziye iphepha kwaye wongeza ileyibhile enophononongo "Ukuza kokukuwa".
Nje ukuba le nkonzo yenziwe yenziwe yiApple, Iya kuba ngumcimbi wokulinda ukuba iibhanki ezinxulumene noko zizihlaziye kwaye zivumele ukuba zonwabe yesi sixhobo sitsha sinikezelwa yinkampani yaseCalifornia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iindaba zeApple Pay azizukufumaneka ngexesha
Ibango le-Apple Watch Series 3 lidlula konke okulindelweyo